SDDM: Maamulaha Kalfadhiga Miisaankiisu fudud yahay oo qurux badan [Ku rakibida ArchLinux] | Laga soo bilaabo Linux
SDDM: Maamulaha Kalfadhiga Miisaankiisu fudud yahay oo qurux badan [Ku rakibida ArchLinux]
SDDM (Maareeyaha Muuqaalka Shaashada ee Fudud) waa sida magaceeda ka muuqata a Maamulaha kal-fadhiga si aad uhesho desktop-ka aan jecel nahay. Kuwa aan aqoon waxa aan ka hadlayo, Maamulaha Kalfadhigu waa shaashadda soo baxda marka aan shidno kombuyuutarka oo na weydiiso username iyo password 😉
Maxaa gaar ah oo ku saabsan SDDM? Waa hagaag, waxay ku saleysan tahay QML oo sidaas darteed waa wax fudud oo customizable. Waad ku guuleysan kartaa mawduucyo aad u qurux badan, sida midka ku yimaadda asluub ​​ahaan iyo sida ugu fiican oo dhan, wuxuu leeyahay is-dhexgal aad u fiican KDE.
2 Ku daar SDDM Arch Linux
4 Mawduucyada la heli karo
Waxaan xasuustaa isku daygii aan ku soo uruurinayey debian hiinraag laakiin waxay u baahnayd ku tiirsanaan maktabad ka sarraysa tan ku taal keydka.
Haddii isticmaale kasta uu ku rakibay qaybinta kale, fadlan ii sheeg faallooyinka si aan u cusbooneysiiyo maqaalka oo aan ugu daro rakibidda meelaha kale ee kale.
Xaaladdan oo kale, waxaan ku guuleystey inaan ku rakibo Archlinux laga bilaabo AUR:
Kuwa ugu horeeya ayaa na rakibaya SDDM iyo tan labaad, waxaan rakibeynaa xirmada si aan ugu dhexgalo Nidaamka Doorbidka de KDE.
Kahor intaadan rakibin wax, fadlan aqri waxaan ka faaloon doono hoos below
Xanibaadahayga ISP awgood ma isticmaali karo dekedda si aan u isticmaalo GIT. Taasi waa sababta, si "loo kaydiyo" bakhaar ka yimaada GitHub waa inaan beddelaa:
Waxaan usameynayaa cadeyntaan maxaa yeelay aniga oo kaashanaya Son_Link Waxay ahayd inaan wax ka beddelo PKGBUILD iyo sababo jira markaan sidan samaynayay, waxay i siisay qalad rakibaadda. Wax walba waxay umuuqdeen inay muujinayaan inaanan kaydinta kaydinta ka iman GitHub.
Ka dib, ka dib markii aan wax ka beddelay qoraalka haddii aan soo dejiyo bakhaarka, laakiin ma dhigin galka halka qoraalka u baahan yahay, markaa qalad kale ayuu bixiyay. Tan waxaan ku saxay anigoo gacanta ku dhaqaajinaya galka.
Laakiin ha argagixin, tani aniga uun bay igu dhacday. KU Son_Link tusaale ahaan waxaa lagu rakibey dhibaato la'aan, ama wuxuu igu yiri 😉
Ku daar SDDM Arch Linux
Markii rakibaadda la dhammeeyay waxaan bilaabay inaan dhaqaajiyo SDDM oo beddelo KDM. Kuweena adeegsada Arch Linux waxay ogyihiin in si loo bilaabo daemon ama adeeg aan adeegsano amarka:
Haddii aan dooneyno inaan ku bilowno xilligan oo keliya:
Waa hagaag, waxa caadiga ah waxay ahaan laheyd in loo joojiyo KDM habka soo socda:
Ka dibna dhaqaajiso SDDM:
Laakiin waa in SDDM ima siin ikhtiyaarkan, sidaas darteed waa inaan ku qabtaa shaqada gacanta. Tan awgeed waxaan u tagnaa oo aan u saxeynaa feylka: /etc/systemd/system/display-manager.service.
Faylkan markii hore wuxuu lahaa sidan:
[Unit] Sharaxaad = K Muuji Maareeyaha Kadib = systemd-user-sessions.service [Adeeg] ExecStart = / usr / bin / kdm -nodaemon [Ku rakib] Alias ​​= bandhigay-manager.service
Marka waan tirtiray oo waxaan uga tagay sidan:
[Unit] Sharaxaad = Maareeyaha Muujinta Miisaanka Fudud Kadib = systemd-user-sessions.service [Adeeg] ExecStart = / usr / bin / sddm Dib u bilow = had iyo jeer [Ku rakib] Alias ​​= display-manager.service
Waan badbaadiyey, dib u kiciyay kombiyuutarka iyo voila. Si toos ah ayey ku bilaabatay SDDM halkii KDM.
Si loo qaabeeyo SDDM gudaha KDE waa inaan tagnaa Nidaamka Doorbidka » Shaashadda Soo-gal (SDDM) oo waxaan heli doonaa wax sidan oo kale ah:
Sidaad u aragto waxaan beddeli karnaa dulucda ah SDDM nasiib wanaagna waxaan haysannaa 4 ikhtiyaar oo wanaagsan oo aan kala dooran karno. Dhinaca midig ee hoose waxaa ku yaal badhan noo oggolaanaya inaan beddelno sawirka asalka.
Tubada Hormarsan waxaan kaheleynaa xulashooyin kale oo xiiso leh sida mawduuca tusmada caadiga ah ama suurtagalnimada in si toos ah loo galo.
Waana intaas asxaabta qaaliga ah. Waxaan horeyba u haysanay ikhtiyaar kale oo aan ugu adeegsan karno Maareeyaha Fadhiga. Xusuusnow inay jiraan waxyaabo kale oo lagu beddeli karo sida GDM, LightDM, KDM, XDM, SLiM ama kaliya ha isticmaalin any
Mawduucyada la heli karo
Waa kuwan shaashadda qaar ka mid ah mawduucyada kale ee aan dooran karno:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » SDDM: Maamulaha Kalfadhiga Miisaankiisu fudud yahay oo qurux badan [Ku rakibida ArchLinux]
Haa, hal abuureyaasha Maui iyo desktop-kooda Hawai oo u eg Deepin Desktop QT waxay qabteen shaqo aad u wanaagsan oo hal abuur leh, habka aan ku fikiro Maui +999
Waxaa jira qorshe khaldan, jinni maahan, waxay noqon doontaa daemon sikastaba.
Qaybta ay ku qoran tahay dhaqaajiso ssdm qaanso 😉
Daemon = jinni Isbaanish
Si dhakhso leh u raadso masaafuris 😀
Yooyo waxay noqon kartaa xD ahahaha
Maya Jinni = jinni.
DAEMON waa kormeeraha diskka iyo fulinta.
Run inay ahaato! Laakiin horeyba waa caado in loo sheego Daemooyinka: Jinni 😀
Sida x11tete11x uu leeyahay, Daemons oo Isbaanish ah waxaa loo yaqaan Demon. Sikastaba ha noqotee haddii qof kale i siiyo erey isku mid ah oo aan isticmaali karo, waan beddelaa.
Waxay noqon kartaa isku macno laakiin wali waa khaldan tahay .., Ma arko in Ingiriisiga ay ugu yeeraan adeegyada.xD
Waxay kuxirantahay sidaad u aragto, kuwa naga mid ah ee tan in muddo ah la socday way ogyihiin waxa ay tahay, in kastoo nidaam ahaan loo dhigo, waxay u dhigeysaa adeeg X.service ah (cad) si looga sooco nooc kale (cutub) http://www.freedesktop.org/software/systemd/man/systemd.unit.html (.marka .maunt .socket)
sida ku xusan wiki (laga soo bilaabo arch) -> hadaadan cayimin sifududka, systemctl wuxuu qaadan doonaa adeeg. Tusaale ahaan, netcfg iyo netcfg.service ayaa u dhigma. (nidaamyada kale, sida debianka, wali waa iska cad)
Waayahay, taas anigu ma dhahayo. Laakiin waxaan ula jeeday si aad u hawlgeliso adeeg waxaad dhigaysaa daemon.service not demon.service, i sax haddii aan khaldanahay. Waxaa laga yaabaa in qoraalku aniga yahay….
Aad baad ugu mahadsantahay soo gelinta ninkaan, maalin walbaba waan arkaa oo weyba iga sii yaabaan ...
Ku jawaab dante_19
Adaa mudan. Waan ku faraxsanahay inaad jeceshahay.
Waxay u egtahay wax fiican inaan isku dayi doono isla marka aan caajiso ubuntu oo aan dib ugu laabto xD arch
Ku jawaab elpapehackero
Waxaan u maleynayaa in Ubuntu sidoo kale lagu rakibi karo. Laakiin ma aqaano haddii aan adeegsanayo PPA ama aan soo ururinayo.
way fiicantahay laakiin waxaan u maleynayaa inaan ku dhejin doono caato
Loogu talagalay dhadhanka dhadhanka .. Maxaa dhacaya in SLiM uu aad u xadidan yahay marka la eego xulashooyinka Xidhitaanka / Dib-u-bilaabista iyo kuwa kale.
Waxaan u maleynayaa in lagu rakibo Xfce uma baahnid kcm-sddm-git,
Waa hagaag waxaad u maleyneysaa inaad fiicantahay, taas oo aan u maleynayo inaad ku qasbeyso gacanta. Wax fikrad ah kama haysto.
Waxaan ku rakibay debian iyada oo loo marayo meel lagu keydiyo, laakiin ma bilaabeyso hehej waxaanan helayaa fariin yar oo fiican oo ii sheegaysa in tilmaamtu ay sharci darro tahay
DAEMON: Ku darida bandhig cusub «: 0» on vt 7
Tilmaamaha Sharci-darrada ah
Tani waa sida quruxda badan ee fariinta aad ii siineyso… Ma jiraa qof wax la yimaada ???
Farriintaasi sidoo kale way ii timid, halkan waxaan ka helay wax aad isku dayi karto oo aad u sheegi karto sida ay ku dhacday 😀
Waa kuwan .deb loogu talagalay debian iyo noocyo kala duwan. .. Weli kuma tijaabiyo mishiinkeyga Linux.
Waxaan ku haystaa archlinux nooca 32-bit ah, sida muuqata xirmada ma jirto.
Waa inaad ka rakibtaa AUR.
Beddelka loogu talagalay KDM oo mar hore aniga igu yara yara caajisay lol ... mahadsanid elav; habka marka aad isticmaaleyso SLIM ee LXDE waxay ka saareysaa xulashooyinka inaad xirto oo aad dib u bilowdo oo aad xalliso waa inaad ku rakibtaa xirmo dheeraad ah. SM-kani isku mid ma sameeyo, miyayna samaynaysaa?
Maya Tan waxaad ku xiri kartaa oo dib u bilaabi kartaa ..
Raali gelin, ma ogi waxa dhacay. La qori lahaa
Si loo hubiyo baakada waxbana igama tuurin; laakiin hadda aniga ayey ii muuqataa. Sidee la yaab leh ma aqaano waxa dhici karay. Waxaan ku dhowahay inaan rakibo, waad ku mahadsan tahay jawaabtaada degdegga ah.
Sida muuqata sddm ayaa ka mid ah xulashooyinka la tixgelinayo Maamulaha Kalfadhiga cusub ee Kde5. Kdm waxay leedahay koodh aad u kakan oo u wareejinta wayland waa mid aad u dhib badan Lightdm-na wuxuu leeyahay rukhsad aan la jaan qaadi karin, markaa waxay u badan tahay in sddm uu noqon doono Maamulaha Kal-fadhiga caadiga ah ee desktop-ka qt.
Hagaag, ma xuma. SDDM kaliya maahan wax qurux badan, sidoo kale waa qafiif waana badali kartaa jirkii hore ee KDM ama hadii taa la waayo waxay leedahay fargeeto KDM.
Maya, xaqiiqdii kama jirto 32-bit.
Si aan u tijaabiyo maqaalka magaalada, waxaan ku xirmay kumbuyuutarka walaalkay (archlinux 64 bits) markaan arkay jawaabta elav waxaan go aansaday inaan markale isku dayo (laakiin ma aanan ogeyn inay kumbiyuutarkayga ku jirin). Waan ka xumahay waxay ahayd qaladkeyga.
Ohh, waa inaan tan dambe isku dayaa 🙂
Miyaan arkaa ilma adeerada @ gato mise waa figradeyda?
Wanaagsan! Wax ku biir weyn!
Fedora sida aan u joojiyo KDM
Jawaab Ender Efrain Fletcher Salas
KDM wuxuu ku naafoobay amarka soo socda:
$ sudo systemctl gab kdm.service
Kuma talinayo inaad ku isticmaasho Fedora KDE, maxaa yeelay horay ayaan u siiyay waana la kulmay dhibaatooyin gaar ah taas, markii aan galinayay erayga sirta ah weligey maan soo galin, waa inaan u guuraa mana garanayo waxa lagu soo celinayo si caadi ah.
Haddii aadan rabin inaad isticmaasho KDM, isticmaal LightDM, waxaan kugula talinayaa… xD
ma loo qaabeyn karaa inuu soo galo asal ahaan?
nin… waxaan horeyba u nahay LABA jawaab ka sugaya ELAV !!!
Jawaab si aad u jilicsan
Waxaa laga yaabaa haddii aad xulashadaada ku badasho gacanta ..
Waxay umuuqataa mid xiiso leh! Waad ku mahadsantahay inaad noosoo gudbisay warar. Waan isku dayi doonaa
Wanaagsan, sidoo kale waxay ku jirtaa keydadka Fedora.
Kiiskeyga waan rakibey oo waxaan raacay talaabooyinka kor lagu sharaxay, laakiin ma bilaabi karo KDE, had iyo jeer waxay ku jirtaa Sddm, markaa hada waxaan dib ugu laabtay KDM si aan u sii wato isticmaalka kumbuyuutarka
Salaan! Ma jirtaa qaab isku mid ah oo lagu sameeyo Fedora 19?
Ku rakib SDDM laakiin ma arko wax isbeddel ah
Ku jawaab Anachronic
Waa maxay sababta aadan u dhigin bartilmaameedka = »_ maran» hantida xiriiriyeyaasha sawirrada, si ay ugu furmaan tab kale oo aysan ugu wada dhicin isla.
Ma taqaanaa sida loo galo goobaha xfce4?
Ku jawaab 7oM4s
Anigu ma awoodi kari weyno inaan ku rakibo Mate, ma qasabbaa inay ahaato KDE?
Jawaab Dante Linares
Waxaan rabaa inaan rakibo wax la mid ah yaaaaa /> w <) / Waxaan isticmaalaa fedora waan kaa tegayaa facebookgeyga hadaad rabto inaad i caawiso https://www.facebook.com/profile.php?id=100006796098740
Waxaan u maleynayaa inaad ku xuso maqaalka in haddii aad isticmaasho nidaamka Arch ama nidaamka wax soo saarka, aad ku rakibi karto mawduucyo badan oo badan AUR, eeg waxaan ku lifaaqay sawirkan si aad u isticmaasho haddii aad rabto: V
Jawaab Rodrigo Orrego
Diiwaanka rakibida: Ku rakib Slackware 14 adigoon ku dhiman isku dayga.
Muuqaaladda softiweer bilaash ah